युवा बढी संक्रमित, किन ? – RemitKhabar
डा. गौतमले पहिलो चरणमा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिमा संक्रमण बढी देखिएको सुनाए। ‘पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि स्थानीयस्तरमा संक्रमण देखिन थालेको छ’, उनले भने। काठमाडौं उपत्यकामा केही दिनदेखि संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। शुक्रबार १ सय ६ जना संक्रमित थपिएका छन्। साउन पहिलो सातापछि काठमाडौं उपत्यकामा लक्षणसहितका संक्रमित फेला परेका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो साता लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ।
उपत्यकाका १३६ ठाउँमा संक्रमित